Paul Pogba uma ciyaarayo Manchester United kulanka Newcastle. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Paul Pogba uma ciyaarayo Manchester United kulanka Newcastle.
Paul Pogba uma ciyaarayo Manchester United kulanka Newcastle.
Posted by: radio himilo November 14, 2017
Muqdisho – Tababaraha Manchester United, Jose Mourinho ayaa lagu soo warramayaa in uusan halis gelin doonin Paul Pogba kulanka Newcastle ee Sabtida.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa seegay 12-kii kulan ee ugu danbeysay ee Red Devils, markii dhaawac muruqa ah uu kasoo gaaray kulankii ay 3-0 kaga badiyeen Basel ciyaartii Champions League-ga ee dhacay 12-kii September.
Xiddiga reer France ayaa ku soo laabtay Old Trafford isaga oo kaga soo biiray Juventus xagaagii 2016-ka, isla markaana ku yimid 89 milyan oo ginni, ayaa tan iyo markii uu ku soo laabtay xerada tababarka United ee Carrington soo kabsasho wanaagsan ku jiray.
Warar ayaa sheegaya in 24 jirkan uu qabanayo kulamo uu u ciyaarayo kooxda, laakiin sida laga soo xigtay The Telegraph, kulanka todobaadkan ee Newcastle United ayaa ah mid aan lagula soo degdegi doonin Pogba.
Kooxda Mourinho ayaa 8 dhibcood ka hooseysa kooxda hoggaanka heysa ee Manchester City.
Previous: Atletico Madrid oo dooneysa ciyaaryahanka Mesut Ozil.
Next: Ronaldo oo doonaya in uu ka tago Real Madrid.